"I-Yinnuo Xiaobanwan INNOBAY" isohlwini lwabazohlwini lwe-Airbnb lwaminyaka yonke i-Shanlan|Igumbi Lombhede Lenkosi Eline-Seaview Balcony King (elinokudla kwasekuseni okubili) - I-Airbnb
"I-Yinnuo Xiaobanwan INNOBAY" isohlwini lwabazohlwini lwe-Airbnb lwaminyaka yonke i-Shanlan|Igumbi Lombhede Lenkosi Eline-Seaview Balcony King (elinokudla kwasekuseni okubili)
Shenzhen, Guangdong, i-China
Ikamelo e-i-kezhan ibungazwe ngu-Fairen
Igumbi ngalinye le-INNOBAY Holiday Homestay e-Yinnuo Xiaobanwan linokubuka kolwandle okuhle kakhulu okungu-180° kanye nokushona kwelanga olwandle. Ngokuphambene neHong Kong Saigon, indawo yezindawo ezimbili.
Othishanhloko abathathu babuye e-Shenzhen bezomba le bungalow yangasese futhi bayenza indawo yokuhlala yasekhaya elula neklanywe ngemva kokuhlangana phakathi nohambo. Ubungcweti balaba bantu abathathu abangenhla buhlobene nehhotela, ngakho igumbi liphezulu kakhulu ngokwedizayini, isevisi kanye nezindinganiso zekhwalithi. Izinto zangasese yiFerragamo, kanti omatilasi yi-Sano, uhlobo olusetshenziswa amahhotela ezinkanyezi ezinhlanu.
Nsuku zonke umphathi wezitsha uzohlinzeka izivakashi ngezinsizakalo ezicabangelayo nezicophelele: indawo yokupaka i-valet, amakhadi okwamukela abhalwe ngesandla, ukulungisa izithelo zokwamukela, nokuyisa izivakashi eziqhingini ezincane ezizungezile eziyimfihlo: i-Lover Island, ukubuka indawo nokubuka ukushona kwelanga. Siphinde futhi sinikeze isevisi yokudubula yobuhle, ukuze umzuzu omuhle wekhasimende ngalinye ugcinwe. Wonke amagumbi ayahlanzwa futhi abulawe amagciwane ngokucophelela. Sicela ukhululeke ukuhlala.
I-B&B catering iyibha yokushona kwelanga edalwe ngokuhlanganyela uhlobo oludumile lwe-Shenzhen "Halfton", oluhlinzeka ngokudla kwasolwandle okuhlukile kwaseMelika kanye nezinhlobonhlobo zobhiya owenziwe ekhaya. Ukulunywa kwe-lobster, ukulunywa kukabhiya, ukufanelana kahle nolwandle nokushona kwelanga!
U-Yingnuo Xiaobanwan wayekuqonda ukulangazelela kwezivakashi ulwandle nokushona kwelanga, futhi wadala izwe lamaphupho okungelabo phakathi kolwandle nezintaba. Siyakwamukela futhi endaweni yezinkondlo ngasolwandle: Yinuo·Xiaobanwan INNOBAY!
Ekwakhekeni kwendawo yokuhlala, ukunqwabelanisa kunesizungu futhi kunengqondo, futhi ukunqwabelanisa kungokwemvelo futhi kukhululekile, futhi kuyavumelana kodwa kuhlukile. Vumela abantu babaleke empilweni yesimanje ematasa, babuyele esimweni somoya esinokuthula nesokungcebeleka esimweni sesimanjemanje esilula kanye nesimo sakudala seholide, futhi bahlole incazelo ebalulekile yabantu nempilo.
Indawo ezungezile ifakwe iKaisa International Resort, futhi okwamanje ipaki evulekile iyipaki lamanzi kanye nepaki yezingane. Kuthatha amaminithi angu-5 ukuya ogwini lomphakathi lwase-Tai O Bay. Ulwandle luhlinzeka ngezindawo zokudlala zamahhala zamanzi, futhi abaqeqeshi abangochwepheshe bahlinzeka ngemisebenzi yamanzi aphephile efana nokugibela i-paddle boarding, kayaking, kanye ne-snorkeling.
Kuthatha imizuzu engu-15 ukushayela ukuya endaweni edumile yase-Dapeng i-Jiaochangwei B&B idolobha, i-Dapeng Ancient City, indawo yokuqala kweziyisishiyagalombili ezinhle e-Shenzhen, kanye neThempeli lase-Dongshan elincane nelinhle.
Hlola ezinye izinketho ezise- Shenzhen namaphethelo